पलसँग अभिनेत्री स्वस्तिमा भिरको बाटोमा किन ? • Gazzabko Online
पलसँग अभिनेत्री स्वस्तिमा भिरको बाटोमा किन ?
बरिष्ठ संचारकर्मी सूरज श्रेष्ठको निर्देशन रहेको एक आकर्षक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । रोनन सुब्बाको स्वर रहेको ‘भिरको बाटो’ बोलको उक्त गीतमा ‘कुटुमा कुटु..’ गीतबाट अहिले अहिले चर्चामा रहेकी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का र अभिनेता पल शाहको अभिनय रहेको छ ।
भिडियो अहिलेको परिवेश अनुसार दर्शक छ । जुन सबैले रुचाउने निर्देशक श्रेष्ठले बताए । भिडियोमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले निकै आकर्षक तरिकाले कम्मर मर्काएकी छन् । उनको् सो क्रियाकलपामा जोशीला युवा जिब्रो टोक्न बाध्य हुन्छन् ।
गीतमा शब्द संगीत डम्बर नेपालीको छ, भने सम्पादन प्रविन श्रेष्ठले गरेका छन् । गम्भिर विष्टको कोरियोग्राफी रहेको भिडियो ह्वाइट प्लस एभि प्रोडक्शनबाट निर्माण भएको हो ।